Alahady Oktobra 30, 2005 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nandritra ny fotoana ela, ny indostrian'ny rindrambaiko dia nizara teo amin'ny vahoaka Software sy ny Application Application Provider. Ny rindrambaiko dia mavesatra ary mihazakazaka eo an-toerana amin'ny PC / MAC anao. ASP dia lozisialy mandeha amin'ny mpizara ary mifandray amin'ny alàlan'ny browser ianao. Ny tombony azon'ny ASP dia afaka mamoaka fanitsiana sy fiasa vaovao izy ireo raha tsy mila mametraka zavatra eo an-toerana ianao. Ny lafy ratsy dia ny rindrambaiko miorina amin'ny navigateur dia voafetra mafy noho ny fandaharan'asan'ny client sy ny fetran'ny browser.
Ohatra tsara vitsivitsy: jereo ny asa fitarihana ary alatsaho ity toerana.
Tianao ve ny MS Word? Misy mpamoaka lahatsoratra tsy mampino hita eto amin'ny Internet. Ity misy iray.
Tsy ho ela dia hanomboka handray an-tanana ny mpamatsy ny serivisy fampiharana. Azoko an-tsaina ny andro hanofananao ny Microsoft Office amin'ny $ 9.95 isam-bolana fa tsy handoavana zato vitsivitsy isaky ny lisansa.
Fanafana ny bilaogy
Inona ny Bailiwick-nao?
Dec 16, 2007 amin'ny 2: 20 AM
@Douglas: "PHP sy VBScript dia ohatra amin'ny fiteny amin'ny lafiny Server."
Tsy izany raha ny marina ara-teknika marina momba ny VBScript. Inona no mety ho marina kokoa dia ny hoe "VBScript dia ohatra iray amin'ny fiteny fanoratana izay nampiasaina indrindra amin'ny lafiny Server ho fiteny voalohany ho an'ny ASP an'ny Microsoft na dia azo ampiasaina ho fiteny fanoratana amin'ny lafiny mpanjifa aza ao amin'ny Internet Explorer an'ny Microsoft."
Eny, vava be izany ary azoko natao ny nanonona teny, fa raha ny teny manodidina, nahoana no mandeha amin'ny ezaka? 🙂